Umkhiqizi kanye Nomhlinzeki Wokulethwa Kwezitimela Isitolo esidayisa yonke impahla | Ngesikhathi
Isevisi enezelwe inani
Isikhathi sokusebenza se-Guangzhou
Ukulethwa okusheshayo kwamazwe omhlaba ngesikebhe - Se ...
Abathengisi besitolo esidayisa yonke impahla yesixazululo sezindiza - Express ...
100% wezimpahla Original Euro - 2019 izinga okusezingeni C ...
Isitolo esidayisa yonke impahla Chinese China USA - Express - O ...
Okuzenzakalelayo ngokwezifiso Izindleko & Ukudluliswa ...
Isitolo esidayisa yonke impahla ngefektri ...
Ukuthuthwa komgwaqo nojantshi KUSUKA ECHINA KUYA EYurophu - Amanani Nesikhathi Sokudlulisa | ISICELO SAMAHHALA | ISINO SHIPPING Rail services With a transit time of 16 to 20 days, ujantshi wezimpahla ushesha kakhulu kunolwandle ...
Umgwaqo Nesitimela ezokuthuthaKUSUKA ECHINA KUYA EYurophu - Izilinganiso Nesikhathi Sokudlulisa | ISICELO SAMAHHALA | UKUTHUNYELWA KWESINO
Ngesikhathi sokuhamba sezinsuku eziyi-16 kuya kwezingu-20, ujantshi imithwalo kushesha kakhulu kunolwandle imithwalo okuthatha izinsuku ezingama-35 ukufinyelela emachwebeni aseFrance iLe Havre neFos-Marseille (njengezibonelo).
UKUTHUTHWA KWEJAYILI KUKHULA KAKHULU UKUDLULA ULWANDLE OLWANDLE, KODWA USASHESHEKA KUNGAKHATHALALISI UMOYA.
Le ndlela ye ezokuthutha ilungele ngokuphelele imikhiqizo yezimboni yenani eliphezulu njengezimoto, izinto zikagesi kanye nemishini yekhompyutha, kanye nemikhiqizo yokuphromotha neyonyaka okufanele ifike lapho iya khona ngokushesha okukhulu.
Imboni yezitimela ithuthukise amazinga amasha wokusebenza kahle, ezomnotho kanye nokusimama okungahumushela ngqo kuhlu lwakho lokuthengiswayo. Ubudlelwano bethu nabasebenza ngojantshi kanye nobungoti bethu kwezokuhamba kwezitimela nakwezokuhamba kwempahla phakathi nesikhathi, kusho ukuthi singanikeza ngempumelelo enkuluezokuthuthaizixazululo. Konke kusekelwa izinsizakalo zethu ezisekelayo, njengokuvunyelwa kwamasiko, ukuphatha ukuphela, ukusatshalaliswa kwezwe kanye nokulethwa kokugcina kwemayela.
INDLELA YOKUTHUTHA ISITILILI IZA NEZINSIZAKALO EZINKULU EZINGU-3:
Izindleko zesitimela ezisuka / ziye eChina kungenzeka zingabizi ngama-50% kunempahla yomoya ohambweni olufanayo. Isikhathi sokuhamba sifushane ngama-45% kuya ku-50%, uma kuqhathaniswa nempahla yasolwandleezokuthutha.
2) IZINQUBO ZOKUSEBENZA NGOKUSHESHA
Ukumenyezelwa nokuhlolwa kwamasiko kungenziwa ngokushesha okukhulu kunakwisimo somoya noma sendabuko yolwandle. Le nsizakalo yamasiko itholakala ngendlela yesevisi ephelele engu-24/7, ephathwa yithimba lethu elikhona eChina.
3) IMISEBENZI EFANELEKILE NEZININGI
Izimpahla ezahlukahlukene zamukelwa ukuthuthwa futhi izinsizakalo ezinikezwayo zifaka phakathi: ukulethwa endlini ngendlu, i-FCL ne-LCL, izimpahla zakudala nezinobungozi.
I-GZ Ontime inikeza ukwethembeka okungenakuqhathaniswa nokuguquguquka ngezixazululo zethu zamaloli ezenziwe ngokwezifiso ngaphezulu komgwaqo. Sikwazi ukufinyelela okokusebenza namandla owadingayo, noma ngabe ukuthunyelwa kwakho kuhluke kanjani. Ochwepheshe bethu bafanisa imithwalo yakho nemoto efanele kanye nomzila ofanele, nekhono lokuhlela kabusha izinsiza uma izimo zishintsha. Siqhuba inqubo kusuka ekugcineni kuze kube sekupheleni ngenkathi sinikeza isisombululo sangokwezifiso ukuhlangabezana nezidingo zakho.
Izixazululo eziguqukayo, ezingezona ezempahla
Ngaphansi kokulayisha iloli (LTL) - Ukuthola Ukonga Kumaphethini Wakho Wezokuhamba
Ukuphatha imithwalo yakho ngesevisi yethu ye-LTL kuyindlela enhle yokwandisa ukuthengiswa kwempahla yakho yasekhaya. I-Yusen Logistics inikezela ngezinsizakalo zokulayisha kanye nokuqinisa i-LTL ukunciphisa izindleko zakho nokwenza ngcono iphayiphi yakho yokusabalalisa.
Ukuletha isipiliyoni, ubuhlakani kanye nokuqonda ezinselelweni zakho zokuthumela umthwalo ongaphansi kwamaloli, singenela ukuxhumanisa nokwengeza inani ngaso sonke isikhathi. Imisebenzi ifaka phakathi:
Kukusiza ukuthi uthuthukise inethiwekhi yezokuthutha esebenza kahle kakhulu, engabizi kakhulu, umngcele wasekhaya noma owela
Uma usikhetha, noma ngabe udinga izinsizakalo eziningi zokuhamba ngezitimela, sizokwenza ngendlela oyifisayo yokulethwa kwakho. Senza konke okusemandleni ukwenza lonke ulwazi lwakho lokuhamba ludlule okulindelwe.
1.I-DDP (Umsebenzi Wokulethwa Wokulethwa), i-DDU (Umsebenzi Wokulethwa Ongakhokhiwe)
2.Isiteshi sokumisa, umnyango nomnyango, umnyango nomnyango, isiteshi nomnyango
3.Booking futhi pre-mpahla ukuhlela
6.Track kanye trace.
Ukuthuthwa kwezitimela kwamazwe omhlaba kuzoba nzima ngokwedokhumenti, imithethonqubo, amanani kanye nemizila. Udinga ukwenza ukuphathwa kwezokuphatha, ukwakha imithethonqubo futhi uthole inani elibiza kakhulu nomzila ongabhekana nawo. Ngakho-ke masenze lula i-ukuphathwa kwezintokwakho. ,
Ithimba lethu elinolwazi linganikeza usizo kuzo zonke izingxenye zenqubo yokuhamba, eliqinisekile ukuthi singakwazi ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zakho.
Langaphambilini Indawo Yokugcina Izindlu
Olandelayo: Izimpahla Zasolwandle
Ikheli: Isikhathi sokusebenza se-Guangzhou
Abathengisi besayensi baxoxa ngezinzuzo ze-F ...
Isitimela Esisha esiya eYurophu
Izisulu zokudutshulwa kwabantu abaningi beFedEx zithola ifundi ...
Inombolo yephakheji yophenyo
Sicela ufake inombolo yakho yephakheji
Qala ukulandela ngomkhondo